Dowladda Ingiriiska oo dib u celinayso 50 qof oo Tahriibayaal ah kana soo jeeda Dalka Ruwanda | Allbalcad Online
Home WARARKA Dowladda Ingiriiska oo dib u celinayso 50 qof oo Tahriibayaal ah kana...
Dowladda Ingiriiska oo dib u celinayso 50 qof oo Tahriibayaal ah kana soo jeeda Dalka Ruwanda
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay dib u celinayso 50 qof oo tahriibayaal ah kana soo jeeda Dalka Ruwanda, waana kuwii ugu horeeyay ee loo diro dalka Rwanda ee bariga Afrika, taasoo qayb ka ah siyaasadda dib u dejinta ee dowladda ee muranka badan dhaliyay.
Wareysi uu siiyay Wargeyska Daily Mail, Ra1isul Wasaaradda Ingiriiska Boris Johnson ayaa daaha ka qaaday tirada, isagoo sheegay inuu filayo mucaaradad badan oo sharci ah laakiin wuxuu ku adkeystay in dowladdu ay “qodi doonto dagaalka”.
Sida uu dhigayo heshiis cusub, dadka lagu xukumay inay si sharci darro ah ku galeen UK ayaa hadda wajahaya in loo duuliyo Rwanda si dib u dejin loogu sameeyo. Siyaasada ayaa si weyn loo dhaliilay.
Dadka dhaleeceeya ayaa waxaa ka mid ah in ka badan 160 hay’adood oo samafal ah, Archbishop of Canterbury, axsaabta mucaaradka iyo taageereyaasha sare ee xisbiga Conservative Party, oo ay ku jirto ra’iisul wasaarihii hore ee Theresa May.
Waxa ay si wada jir ah su’aalo uga keeneen anshaxa, sharciga, kharashka iyo waxtarka siyaasadda.
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka Iyo Madaxda Warbaahinta oo Kulan yeeshay
Next articleRussia using famine as a threat – Zelensky